Ụgbọ ala BMW na-efe efe enwetara Asambodo Ikuku
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » EU » Ụgbọ ala BMW na-efe efe enwetara Asambodo Ikuku
Mgbe emechara awa 70 nke "nnwale ụgbọ elu siri ike," nke gụnyere ihe karịrị 200 takeoffs na ọdịda, ndị ọrụ ụgbọ njem Slovak nyere ndị ọrụ ahụ "Asambodo ikike ikuku". Klein Vision AirCar Ejiri igwe BMW dị lita 1.6 kwadoro, nke nwere ike ịgbanwe site na ụgbọ okporo ígwè gaa n'obere ụgbọ elu.
Dị ka Klein Vision si kwuo, ule ụgbọ elu niile na-akwado nke ọma European Agency Safety Agency (EASA) ụkpụrụ.
"Nnwale ụgbọ elu ndị ahụ siri ike gụnyere ụgbọ elu zuru oke na nhazi ọrụ ma gosipụta nkwụsi ike dị ịtụnanya na ọnọdụ ụgbọ elu," Klein Vision kwuru na nkwupụta mgbasa ozi.
The Klein Vision AirCar na-agba ọsọ na "mmanụ ọkụ a na-ere n'ọdụ ụgbọ ala ọ bụla," Anton Zajac, onye na-arụkọ ọrụ nke Klein Vision, kwuru. Ụgbọ ala ahụ nwere ike ịfe n'ogo kachasị elu nke 18,000 ụkwụ, ka ọ gbakwụnyere. Ọ na-ewe nkeji abụọ na sekọnd iri na ise iji gbanwee site na ụgbọ ala ka ọ bụrụ ụgbọ elu. Nku na ọdụ na-apụ na-akpaghị aka maka ịnya ụgbọ ala.
Onye na-ekwuchitere Klein Vision kwukwara na a chọrọ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ elu iji efe ụgbọ ala ngwakọ. O kwupụtala olile anya inwe AirCar na azụmaahịa n'ime ọnwa iri na abụọ.
N'ọnwa June, ụgbọ ala na-efe efe mezuru ụgbọ elu nnwale nkeji iri atọ na ise n'etiti ọdụ ụgbọ elu dị na Nitra na isi obodo Bratislava na Slovakia. Mgbe ụgbọ elu ahụ rutere, ụgbọ elu ahụ ghọrọ ụgbọ ala ma kpụga ya n'etiti obodo.
“Asambodo AirCar na-emepe ụzọ maka imepụta ọtụtụ ụgbọ ala na-efe efe nke ọma. Ọ bụ ọrụ gọọmentị yana nkwenye ikpeazụ nke ikike anyị ịgbanwe njem dị anya ruo mgbe ebighị ebi,” onye nrụpụta AirCar Stefan Klein kwuru.
BMW malitere dị ka onye na-emepụta ụgbọ elu engine, ma mgbe WWI Germany amachibidoro ime ụgbọ elu ma ọ bụ engine maka ha (maka afọ ise). Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ gbanwere ime ọgba tum tum na ụgbọ ala. N'afọ 1924, ha maliteghachiri imepụta engines nke ụgbọ elu, ma kwụsị na 1945. Ihe ngosi akara ngosi nke nwere akụkụ anọ nwere agba anọ na-anọchi anya ụgbọ elu ụgbọ elu na-agbagharị agbagharị.
Aviation Germany ikike Transport
Ndị uwe ojii kpọrọ oku mgbe ndị njem mere ọgbaghara na ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Diana ekwu, sị:
Jenụwarị 26, 2022 na 19:15
Amaara m na ha ga-enwe ụgbọ ala na-efe efe ngwa ngwa mana nke a bụ ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya. Ị naghị ekwu ihe ga-eri nke a.